Basy mena mena lehibe - Ahoana ny fomba ahazoana azy | Torolàlana ho an'ny lalao, kilalao, legiona | WoW Guides | WoW Guides
Big Red Ray Gun - Ahoana no ahazoana azy
Sofia Vigo | | Game Guide, kilalao, Legiona
Salama daholo. Androany aho mitondra torolàlana kely ho anao mba hahazoanao ilay kilalao Basy mena mena lehibe ary ampio iray hafa ao amin'ny boaty kilalao.
Basy mena mena lehibe
Ho an'ireo mbola tsy manana kilalao Basy mena mena lehibe Holazaiko aminao izay tokony hataonao mba hahatratrarana azy. Kilalao mahatsikaiky tokoa izy io satria mampitombo ny haben'ny biby fiompintsika ary mivadika ho mena. Ho fanampin'izay, hampitomboinay indray ny fanangonana kilalao izay efa fantatrao fa rehefa mahatratra 300 dia hanome antsika tendrombohitra manidina, Mpamily hazo mekanika, milay be.
Ahoana ny fomba hahazoana azy
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika hahazoana ny kilalao Basy mena mena lehibe dia ny mankany Kalimdor, manokana ho Dustwallow Marsh ary avy eo isika dia afaka manidina, milomano na mandeha an-tongotra mankany amin'ny Nosy Alcaz, izay toerana anaovana ity kilalao ity.
Tokony hotadidintsika fa raha manidina isika, raha vantany vao miditra ny faritra manodidina ny faritry ny Nosy Alcaz, hotifirin'ny fitaovam-piadiana antiaircraft isika izay Dokotera Weavil nametraka manerana ny nosy. ny Dokotera Weavil Izy no tsy maintsy vonointsika hahazoana ny kilalao Basy mena mena lehibe.
Rehefa tonga any amin'ny nosy isika dia tsy maintsy manatona ny tetezana hazo izay tsy maintsy idirantsika. Feno fahavalo ny nosy iray manontolo ka mila mitandrina tsara ianao. Hihaona isika Fikomiana fiarovana mafy ary fahavalo mekanika marobe izay tsy maintsy hesorintsika. Ary koa ary arakaraka ny toetrantsika miaraka no ahafahantsika mampiasa ny fahaizan'ny camouflage handroso haingana kokoa.
Miditra amin'ny lalana isika ary ho tonga amin'ny sampanan-dalana, handray ny lalana mankany amin'ny ankavanana ary hanohy handroso tsara, hanadio ny faritry ny fahavalo. Ho tonga amin'ny faritra iray izay tsy maintsy hianatsika ankavia isika.
Amin'ity faritra ity dia afaka mahita trano fitobiana telo isika, mamono ireo fahavalo izay eo isika ary hiditra ny toby izay eo afovoany ary misy rihana roa. Any amin'ny rihana ambony no tanjontsika, ny Dokotera Weavil.
Rehefa miditra amin'ny toby isika dia tsy maintsy mitandrina ary manafoana ireo fahavalo rehetra ho hitantsika ao anatiny. Ato aoriana dia afaka mahita tohatra vitsivitsy tsy maintsy hianika isika.
Rehefa miditra amin'ity efitrano ity dia tsy maintsy mitandrina isika, satria ao no ahitantsika alika mekanika goavambe. Raha toa ahy, mandeha miaraka amina palitao ianao, dia azonao atao ny manararaotra mampitafy azy sy manampy izany ao amin'ny lisitry ny biby fiompinao. Raha mandeha miaraka amina mpilalao hafa ianao dia tsy maintsy vonoinao izy raha te hanohy.
Raha vantany vao maty na voafolaka ilay alika, dia miakatra miadana miakatra amin'ny tohatra ananantsika ato amin'ity efitrano ity isika ary rehefa miditra ny varavarana, any aoriana dia ho hitantsika ny Dokotera Weavil, manodinkodina milina. Tsy maintsy hamono azy isika mba hahazoana ilay Basy mena mena lehibe.
Raha sendra ahy toa ahy izy ity ary tsara vintana ianao dia ho azonao amin'ny andrana voalohany, raha tsy izany dia hiandry valo minitra ianao mandra-pahatongan'ny Dokotera Weavil avereno indray ary vonoinao indray izy. Satria ny filatsahan'ity kilalao ity dia tsy 100%, dia tsy maintsy vonointsika mandra-pahazoantsika azy.
Ny kilalao Basy mena mena lehibe Tsy voafatotra izy io rehefa raisinao, ka azonay atao ny mivarotra azy amin'ny lavanty na manome izany ho an'ny namana.
Rehefa manana ny kilalao ianao, mba hahitana ny fomba fiasan'izy io, dia ianaranao izany ary miantso ny iray amin'ireo biby fiadinao amin'ny ady ianao ary mampiasa azy ilay kilalao. Amin'izay fotoana izay dia ho hitanao fa mitombo be ny biby fiompinao ary mivadika mena. Amin'ny biby fiompy sasany dia mahatsikaiky ny vokany.
Araraoty fa eo amin'ny faritra ianao, ianareo izay nanapa-kevitra ny handeha hiaraka amin'ny mpihaza, dia afaka mitsangatsangana manerana ny nosy ianao ary manandrana mampandady ireo biby fiompy mekanika ao aminy, satria tena milay
Ary tsy misy hafa. Manantena aho fa tianao izany ary amporisihina ianao handeha amin'ilay kilalao mba hanampy azy amin'ny fanangonana anao.
Mandra-pahatongan'ny bandy hafa, mifankahita any Azeroth!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: WoW Guides » Game Guide » Big Red Ray Gun - Ahoana no ahazoana azy
Outlaw Rogue - Torolàlana PVE - Patch 7.3.5
Unholy Death Knight - Torolàlana PVE - Patch 7.3.5